Ngwọta ụlọ ọrụ |
KT dizel Generator
KT Cummins Series Dizel Generator
KT Perkins Series Dizel Generator
KT Deutz Series Dizel Generator
KT Doosan Series Dizel Generator
KT Mitsubishi Series Dizel Generator
KT SDEC Series Dizel Generator
KT Yuchai Series Dizel Generator
KT ISUZU usoro Dizel Generator
KT Ricardo usoro dizel Generator
KT obere Generator
Mmanụ ụgbọala Generator
KT Natural Gas Generator setịpụrụ
KT Biogas Generator setịpụrụ
KT High-voltaji Generator
Akụkụ Dizel Generator
Cummins Generator Akụkụ
Perkins Generator Akụkụ
Akụ Yangdong Generator
Stationgbọ okporo ígwè
site ha na 20-09-05
Mgbapu ike na ntanetị okporo ígwè abụghị naanị ihe na-adịghị mma; ha bụkwa ihe iyi egwu dị egwu na ahụike na nchekwa. Ọ bụrụ na ike agwụla n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè, sistemụ ọkụ, sistemụ nchekwa, sistemụ telecom, sistemụ akara na sistemụ data ga-ada. Stationlọ ọrụ ahụ dum ga-abanye n'ọgba aghara na ụjọ ...
Onye na - emepụta ihe ọkụkụ na - ewepụta ikike kent nwere ike inye ikike ga - eme ka ike gwụ ma nweta osisi n’ịgbado ọkụ ọkụ ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ike akwụsị inye ya ike. Anyị na ngwa arụnyere ngwa ngwa, ike mfe, ejikwara reliably na-anapụta ndị ọzọ ike. Oru oma ike gener ...
Ike Kent na-enye ndị na-enye mmanụ diesel maka ndị agha iji gboo mkpa teknụzụ nke ndị mba ụwa. Ikike dị irè ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya dị mkpa iji hụ na e mezuru ozi nchekwa dị ka ihe ịga nke ọma dị ka o kwere mee A na-ejikarị ndị na-ere ọkụ anyị eme ihe dị ka ikike kachasị n'èzí, ...
N'èzí Projects Generator Nịm Kent Power ngwọta maka n'èzí oru ana achi achi elu arụmọrụ nke Ngwuputa ngagharị na usoro. N'ihe banyere arụmọrụ, ọrụ na ndozi nke generator generator, ụlọ ndị dị n'èzí nwere ihe ndị siri ike chọrọ na usoro generator. Ike Kent nwere ...
Mmanụ Mmanụ Ike Ngwọta Kent Ike na-enye a Pọtụfoliyo keukwu mbara ike nchedo ngwọta maka mmanụ ubi. Mwepụta mmanụ na gas na-adịkarị na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na mpaghara ndị mmadụ na-adịkarịghị, na gburugburu ndị a na ntanetị ike ndị nwere ike bụrụ ndị nwere ike ịkarị ike na mpaghara dị otú ahụ ...
Genelọọgwụ Generator Set Ngwọta Na ụlọ ọgwụ, ọ bụrụ na a na-aba uru na etinyere, a ghaghị inye ike mberede maka nchekwa ndụ na oke alaka dị oke egwu n'ime sekọnd ole na ole. Ike maka ụlọ ọgwụ na-enye ohere enweghị nkwụsị ma na-aghaghị ịbụ ...
Telecom & Data .lọ Ọrụ
A na-etinyekarị igwe na-enye ọkụ na telecom na ụlọ ọrụ telecoms. Ọtụtụ mgbe, generator na-esetịpụ 800KW dị mkpa maka ọdụ mpaghara, yana jenerato setịpụrụ 300KW ka 400KW dị mkpa maka ọdụ ọchịchị, ebe ike nchekwa na-abawanye Telecom Power Solution Ihe ndị na-enye ọkụ ha ...
Buildinglọ ahụ kpuchiri oke ọhịa, gụnyere ụlọ ọrụ, skyscrapers, residences, hotels, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, wdg. Ihe owuwu ihe owuwu ihe owuwu ihe
Banks Generator Set The diesel generator sets na-anọchite anya nnukwu ego itinye ego na ntụkwasị obi ha, ọkachasị na ọnụnọ nke generator generator, ọ dị oke mkpa. Kslọ akụ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke kọmputa dị elu na akụrụngwa ndị ọzọ, enwere ike rụọ ọrụ naanị na ...
Mining Ike Ngwọta Na-emekarị ike generators na-eji dị ka praịm isi iyi maka ndụ kwa ụbọchị, injinịa na Ngwuputa saịtị. Kent ike ngwọta maka Ngwuputa ana achi achi elu arụmọrụ nke Ngwuputa ngagharị na usoro. Anyị na-enye sistemu ike a pụrụ ịdabere na ya na nnyefe ọsọ ọsọ, nke nwere ike ịkachasị oge elekere ...